Tijaabada caafimaad ee nooca kiniinka ee tallaalka COVID-19 ayaa ka bilaabatay Israel
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Tijaabada caafimaad ee nooca kiniinka ee tallaalka COVID-19 ayaa ka bilaabatay Israel
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhammaan tallaallada hadda jira ee COVID-19 waxaa lagu maareeyaa hal ama laba duritaan.
Tijaabo caafimaad oo ku saabsan 24 mutadawiciin ah oo aan la tallaalin oo loogu talagalay nooca hal kaabsal ah ee tallaal la oggolaaday.
Kaabsoolka waxaa loo isticmaali karaa xoojin ka soo horjeedka noocyada Delta ee faafa badan.
Kiniiniga ayaa lagu tijaabiyay doofaarka xayawaankuna waxay soo saareen unugyada difaaca jirka ka dib markii la qaatay.
Qudus Dawooyinka Dawooyinka Oramed ku dhawaaqay in ogolaansho laga helay Xarunta Caafimaadka ee Tel Aviv Sourasky si loo bilaabo tijaabo caafimaad oo ku saabsan 24 mutadawiciin ah oo aan la tallaalin oo loogu talagalay hal nooc oo kaabsal ah oo ah tallaalka COVID-19.
Shirkadda Oramed ayaa ku dhawaaqday bishii Maarso inay tijaabisay kiniinkeeda doofaarka isla markaana xayawaanku soo saareen unugyada difaaca jirka markii la maamuley
Nooc kiniin ah oo ka mid ah tallaalka coronavirus ayaa noqon kara "wax ka beddele ciyaarta" waddamada leh heerka tallaalka oo hooseeya, horumariye ayaa yiri.
Shirkadda ku takhasustay sameynta noocyada afka laga qaato ee daroogooyinka oo badanaa lagu qaato cirbad, ayaa sidoo kale hadda waxay wadaa tijaabooyin ay ku dheehan tahay kaabsalkeeda afka si loo daweeyo cudurka macaanka Nooca-2 Dhammaan tallaallada hadda jira ee COVID-19 waxaa lagu maareeyaa hal ama laba duritaan.
Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee shirkadda Oramed Nadav Kidron, tijaabada kiniiniga tallaalka ee COVID-19 ayaa la filayaa inuu bilaabmo bisha soo socota, marka ay hesho oggolaanshaha ugu dambeeya ee Wasaaradda Caafimaadka.
Kidron wuxuu intaas ku daray in kaniiniga loo isticmaali karo xoojin ka dhan ah noocyada faafa ee Delta.
"Tallaalkeenna afka, oo aan ku tiirsaneyn silsilad-qaboojiye quwad-qoto dheer oo ka duwan tallaallada kale ee coronavirus, waxay macnaheedu noqon kartaa dhammaan farqiga u dhexeeya waddan awood u leh inuu ka soo baxo cudurka faafa iyo in kale," ayuu yiri Kidron